We.com.mm - ပိုပြီးထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ပိုပြီးထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
သင်က ထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေခွဲမရဖြစ်နေရင် အခုပြောပြမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်က ထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်လေးတွေ မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း ခုကစပြီး မွေးမြူလိုက်တော့နော်။
၁. အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် အဲဒီ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာလေ့လာတယ်
ဘဝတစ်ခုလုံးစာ အရေးပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားအရေးကြီးတဲ့အရာ တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာလေ့လာပြီးမှလုပ်ပါ။ ဒါမှ တစ်ခုခုအမှားအယွင်းဖြစ်သွားရင်တောင် နောင်တရတာမျိုး မဖြစ်မှာပါ။
၂. အသစ်သစ်တွေကို အမြဲတမ်း လေ့လာသင်ယူတယ်
ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခု လေ့လာတာဖြစ်နိုင်သလို၊ creative skill တခုခုကို လေ့လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့skill တွေကို ဖြည့်ထားလေ ပိုပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလေပါပဲ။ ဘယ်ဖက်ကစမ်းစမ်း ညာဖက်ကစမ်းစမ်း အေးဆေးပဲဆိုတာမျိုး။
၃. ဘာပဲလုပ်လုပ် မလုပ်ခင် အစီအစဉ်ဆွဲတယ်
ကောင်းမွန်စွာ အစီအစဉ်ဆွဲထားတာက ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေဟာ ကုမ္ပဏီမထောင်ခင် အစီအစဉ်ဆွဲတယ်။ အားကစားသမားတွေကလည်း ကစားနည်း technique တွေကို ကြိုတင်လေ့ကျင့်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင် စီစဉ်တာက အောင်မြင်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်နေကျ လုပ်ငန်းစဉ်တွေတောင် သေချာအစီအစဉ်ချပြီးလုပ်ရင် ပိုအဆင်ပြေချောမွေ့တာ တွေ့ရမှာပါ။
၄. ကျရှုံးခဲ့ရင်လည်း သင်ယူတယ်၊ ပြန်တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်
ကျရှုံးသွားတဲ့အခါ လူတွေဟာ အဲဒီအရှုံးကို လုံးဝအရှုံးပေးပြီး ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ တကယ်တော့ ရှုံးနိမ့်ခြင်းဆိုတာ ခံယူတတ်ရင် တကယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာ သူတို့မသိလေရော့လား။ ရှုံးနိမ့်ခြင်းက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေပေးတယ်၊ ပြန်တည့်မတ်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေ ဖွင့်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးပါနဲ့။ အခြေအနေက ဘယ်လောက်ပဲဆိုးရွားနေပါစေ၊ ပြဿနာတွေက ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်ရပါစေ ကိုယ်ကသာအရှုံးမပေးပဲ တင်းခံနေမယ်ဆိုရင် အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါက လူမှုရေး ခွဲခြားသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကတစ်ကယ်ကို ထည့်တွက်ရမယ့် ကိစ္စပါ။ လူတွေဟာ သူတို့ပေါင်းသင်းတဲ့သူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေ၊ ဝါသနာတွေ ကူးစက်လာတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထက်မြက်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတာပါ။ ထက်မြက်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါ သင့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလာမယ်၊ အတွေးအခေါ်တွေပိုကျယ်ပြန့်လာမယ်၊ စိတ်ဓာတ်လည်း ကြံ့ခိုင်လာပါမယ်။
၆. ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူး
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို နားစွင့်ထားရပါမယ်။ ဒါက သင့်ကို ပိုတော်လာစေရုံမက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ရလာစေပါတယ်။ IELTS တို့ SATS တို့ဖြေရင်ပိုသိသာပါတယ်။ အဲလိုစာမေးပွဲတွေမှာ international knowledge တွေကို သိထားရင် ဖြေရတာ ပိုလွယ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို အလဲထိုးအနိုင်ယူဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းအဆင့်ဆင့်
ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမေ့နိုင်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံးအချက် (၃) ချက်
ကိုယ့်ကို လူအထင်ကြီးအောင် အသုံးမချသင့်တဲ့ အရာ (၅) ခု
2018 မှာ ပျော်ရွှင်ချင်ရင် ဒီအကျင့်ဟောင်းတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ